လမ်း 5: You Don't Know — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
လမ်း 5: သင်သိပါမနေပါနဲ့
မိတ်ဆက်ခြင်း / နမူနာ:
ယရှေုသညျ, အိုးသညျယရှေု, အကြှနျုပျ၏ယရှေုသညျ, ငါဒါကြောင့်သင်ကိုချစ်ဘာကြောင့်ကန့်
အကြှနျုပျ၏ရွေးကောက်ပွဲသေချာစေရန် Running, အိုဘားမားဘိုင်ဒန် (နားလည်ပါတယ်?)
နေ့စဉ်နေ့တိုင်းငါ homiciding တာပါ
ငါ့အထဲမှာအကလူကြမ်း Killing, တစ်ခါတစ်ရံတွင်ထိုသို့ traumatizing င် (ဒါကြောင့်မဖြစ်?)
ငါဖွင့်မျက်စိနဲ့အိပ်မက်မက်တယ်နဲ့တူခံစားမိ, အကြှနျုပျ၏စိတျ floating
မိုဃ်းကောင်းကင်မြင့်တက်နေဖြင့်ဓား, မိုဃ်းတိမ်ကို9ငါ့သမုဒ္ဒရာရဲ့
ကိုယ့်ငါဝမ်းမြောက်ခြင်း feeling တာပါလူကိုပြောသမျှကိုပွောဆိုကွညျ့ရှု
သငျသညျကိုသာငါရှောက် သွား. သိလိုလျှင်, ငါမူကားနေဆဲယခုရပ်နေတာပါ
ငါပိုမိုမြင့်မားရ, ပိုမိုမြင့်မား, ပိုမိုမြင့်မား
သငျသညျမသိရပါဘူး (5X ကို)
မြင့်မားတဲ့ဓားနဲ့ကျွန်မအခမဲ့ feeling တာပါ
သူတို့ Lebron နောက်ကျောကပြောသည်သောအခါအကြှနျုပျကိုကလိဗ်လန်တူခံစားတယ်
ငါ streamers နှင့်အတူစစ်ရေးပြပစ်သောသူအပေါင်းတို့သည်ကဘာလဲဆိုတာ, ငါသညျကောငျးခံစားတာပါ
သငျသညျငါကောင်းသော feeleth ပြောနိုင်ပါတယ်, မိုးရွာရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းမေ့လျော့တတ်
Bruh ငါမြေပြင်မခံစားရနိုင်, အကြှနျုပျ၏ခြေထောက်ပေါ်မျှကျောက်ဆူး
ငါ Denver မိုင်မြင့်မားပြောဆိုမှုမျိုးတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ကြဘူး, ငါပိုကောင်းလုပျနိုငျ
သူကဒီမှာငါ့ကိုတယ်မြင့်မားခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရာဌာနနှင့် bro အထဲ၌ကျိန်းဝပ်
Brandon • ဒီဇင်ဘာလ 9, 2014 တွင် 5:24 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒီသီချင်း… မေလဘုရားသခငျသညျကိုအလွန်ခရီးစဉ်ကိုသင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူ. သခင်ဘုရားကိုအတူတူပြောပါတယ်လျှင်သင်သည်မကြာမီကောင်းစွာရရှိမည်.
ဂျင်မီ • ဇန္နဝါရီလ 21, 2016 တွင် 3:00 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ရုံအံ့သြ – အကြောင်းကိုအစိတ်အပိုင်းကိုမ “အိုဘားမားဘိုင်ဒန်” သင်တို့အဘို့အမဲကြောင်းဆိုလိုတာနှင့် / သို့မဟုတ်အိုဘားမား၏သမ္မတသက်တမ်းကိုထောကျပံ့? ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအဖြစ်, ကျွန်မအနေနဲ့အာဖရိက-အမေရိကန်သမ္မတကိုထောကျပံ့ဖို့ကိုချစ်မယ်လို့ – ဒါပေမယ့်သမ္မတအိုဘားမားတချို့တရားမဲ့သောအရာတို့ကိုအထောက်အပံ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး? ငါသည်သင်တို့ကိုအလွန်အလုပ်များနေစိတ်ကူး, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားဘို့ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်စကား.